ကြိတ်ကြွေနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဖွင့်မပြောဘဲ၊ တစ်ခြားသူနဲ့စေ့စပ်မှ အဓမ္မကျင့်ခဲ့သူ – Maharmedianews
မူဆယ်တွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ (၂) ဦး တွေ့ရှိ ဆိုသည့် သတင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးမှ ရှင်းလင်း
“(၈) နှစ်သမီးလေးကို ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ခဲ့တဲ့သူအတွက် ထောင်ဒဏ် နှစ်(၃၀) ချမှတ်လိုက်ပြီ”
ညမှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ ဆေးရုံကို အချိန်မီရောက်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ညလုံး ဒီတိုင်းပစ်ထားခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေး
“ညောင်ရွှေမြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသူတစ်ဦးကို သံသယလူနာအဖြစ် စောင့်ကြည့်ကုသနေ”
အနီရောင် အပိန့်ထ၊အသက်ရှုကြပ်၊ နှာခေါင်းသွေးယို လက္ခဏာများနှင့် ကလေး(၅၀) ဦးခန့် ဖျားနေပြီး (၁)ဦးသေဆုံး
ကြိတ်ကြွေနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဖွင့်မပြောဘဲ၊ တစ်ခြားသူနဲ့စေ့စပ်မှ အဓမ္မကျင့်ခဲ့သူ
August 24, 2019 admin555
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ တောင်စူမားတြားမှာနေထိုင်တဲ့ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ ကျောင်းကတည်းက ကြိတ်ကြွေနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဖွင့်မပြောဘဲနေလာခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးက တစ်ခြားသူနဲ့ စေ့စပ်မယ်ဆိုတာ သိတဲ့ညမှာပဲ၊ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး အဓမ္မကျင့်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးအိမ်ကို ညဘက်မှာ သွားပြီး၊ သူမကို အဓမ္မကျင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ ကောင်မလေးဟာ ငယ်ငယ် မူလတန်းကျောင်းသူဘဝကတည်းက အတူကြီးပြင်းလာကြသူတွေ ဖြစ်ပြီး၊ သူ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ပေမယ့် ကောင်မလေးက မသိကျိူးကျွန် ပြုနေလို့၊ ဖွင့်ပြောဖို့ အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူးတဲ့။
နောက်ဆုံးတော့ အပယ်ခံအမျိုးသားဟာ မနက်ဖြန်လောက်မှာ စေ့စပ်မယ့် ကောင်မလေးကို ပန်းကောင်းအညွှန့်ချိုးပြီး၊ ဖျက်ဆီးလိုက်တော့တာပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ အစစ်ခံချက်မှာတော့ သူ ကောင်မလေးအိမ်ကို ညဘက် ရောက်သွားချိန်မှာ၊ ရှေ့တံခါးက သော့ခတ်မထားတဲ့အတွက် အိမ်ထဲကို ဝင်ရတာ အလွယ်တကူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကောင်မလေးအခန်းကို ရောက်သွားချိန်မှာပဲ ဘယ်သူလဲလို့ မေးချိန် တွန်းလှဲပြီး အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ အဲဒီအိမ်ကို ဝင်ထွက်နေကြမို့ ယခင်က ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေကိုလည်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကောင်မလေးရဲ့ လျှော်ဖွပ်ဖို့ရှိတဲ့ အတွင်းခံတွေကို အကြိမ် ရာနဲ့ချီ နမ်းရှိုက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကောင်မလေးက အဓမ္မကျင့်ခံနေရချိန်မှာ သူမနဲ့ စေ့စပ်မဲ့ကောင်လေးလားဆိုပြီး မေးခဲ့ရာ အဓမ္မသမားမှာ ပိုဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီး၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီနောက် သူဟာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ရာဇဝတ်ပုဒ်မ (၂၈၉)ဖြင့် စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီး၊ တရားရုံးက ထောင်(၉)နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
မိုဃ်းသက် – မဟာ ခေတ်သစ်မီဒီယာ
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ တောငျစူမားတွားမှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ(၂၃)နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဈယောကျဟာ သူ ကြောငျးကတညျးက ကွိတျကွှနေရေတဲ့ သူငယျခငျြးမလေးကို အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ ဖှငျ့မပွောဘဲနလောခဲ့ပါတယျ။ ကောငျမလေးက တဈခွားသူနဲ့ စစေ့ပျမယျဆိုတာ သိတဲ့ညမှာပဲ၊ မခံမရပျနိုငျဖွဈပွီး အဓမ်မကငျြ့ခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ သူငယျခငျြးကောငျမလေးအိမျကို ညဘကျမှာ သှားပွီး၊ သူမကို အဓမ်မကငျြ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့ ကောငျမလေးဟာ ငယျငယျ မူလတနျးကြောငျးသူဘဝကတညျးက အတူကွီးပွငျးလာကွသူတှေ ဖွဈပွီး၊ သူ ဘယျလောကျပဲ ခဈြပမေယျ့ ကောငျမလေးက မသိကြိူးကြှနျ ပွုနလေို့၊ ဖှငျ့ပွောဖို့ အခှငျ့မသာခဲ့ပါဘူးတဲ့။
နောကျဆုံးတော့ အပယျခံအမြိုးသားဟာ မနကျဖွနျလောကျမှာ စစေ့ပျမယျ့ ကောငျမလေးကို ပနျးကောငျးအညှနျ့ခြိုးပွီး၊ ဖကျြဆီးလိုကျတော့တာပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ အစဈခံခကျြမှာတော့ သူ ကောငျမလေးအိမျကို ညဘကျ ရောကျသှားခြိနျမှာ၊ ရှတေံ့ခါးက သော့ခတျမထားတဲ့အတှကျ အိမျထဲကို ဝငျရတာ အလှယျတကူဖွဈခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
ကောငျမလေးအခနျးကို ရောကျသှားခြိနျမှာပဲ ဘယျသူလဲလို့ မေးခြိနျ တှနျးလှဲပွီး အတငျးအဓမ်မ ပွုကငျြ့ခဲ့တာပါ။ သူဟာ အဲဒီအိမျကို ဝငျထှကျနကွေမို့ ယခငျက ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ အမှုတှကေိုလညျး ဝနျခံခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ကောငျမလေးရဲ့ လြှျောဖှပျဖို့ရှိတဲ့ အတှငျးခံတှကေို အကွိမျ ရာနဲ့ခြီ နမျးရှိုကျခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
ကောငျမလေးက အဓမ်မကငျြ့ခံနရေခြိနျမှာ သူမနဲ့ စစေ့ပျမဲ့ကောငျလေးလားဆိုပွီး မေးခဲ့ရာ အဓမ်မသမားမှာ ပိုဒေါသထှကျသှားခဲ့ပွီး၊ ကွမျးကွမျးတမျးတမျး အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့ပါတယျတဲ့။ အဲဒီနောကျ သူဟာ ထှကျပွေးသှားခဲ့ပါတယျ။ သူ့ကို သကျဆိုငျရာက ဖမျးဆီးပွီးနောကျ ရာဇဝတျပုဒျမ (၂၈၉)ဖွငျ့ စှဲခကျြတငျခဲ့ပွီး၊ တရားရုံးက ထောငျ(၉)နှဈ ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။
မိုဃျးသကျ – မဟာ ခတျေသဈမီဒီယာ
← ဥာဏ်ကောင်းလှတဲ့ ချင်ပန်ဇီ မျောက်တစ်ကောင်ရဲ့ လုပ်ရပ်က လူတွေကို အံ့သြစေခဲ့(ရုပ်သံ)
သိန်းနီမြို့နယ် ရေပူဂိတ်မှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ် ပိန်းဆာပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦးသေ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရ →
Copyright © 2020 Maharmedianews. All rights reserved.
gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace